Ninkii loo soo qabtay weeraradii Malmö oo maxkamad la soo taagay | Somaliska
Maanta ayaa maxkamad la soo taagay ninkii loo soo qabtay in uu ka dambeeyay weeraradii lagu ugaarsanayay dadka soo galootiga ah ee dhawaan ka dhacay Magaalada Malmö. Ninkaan oo magaciisa lagu sheegay Peter Mangs oo 38 jir ah ayaa maxkamadu amartay in xabsiga lagu sii hayo. Wararka khaar ayaa sheegaya in labo qori oo ninkaan gurigiisa laga helay midka mid ah ay baaritaan ku soo baxday in loo isticmaalay weeraradii magaalada ka dhacay. Aabaha ninkaan dhalay ayaa sheegay in wiilkiisa uu ku noolaa cabsi wayn oo uu ka qabo dadka soo galootiga ah in ay la wareegi doonaan Sweden. Ninkaan ayaa haday ku cadaato dambiyada lagu soo oogay wajihi doona xabsi daa'in.
Maanta ayaa maxkamad la soo taagay ninkii loo soo qabtay in uu ka dambeeyay weeraradii lagu ugaarsanayay dadka soo galootiga ah ee dhawaan ka dhacay Magaalada Malmö. Ninkaan oo magaciisa lagu sheegay Peter Mangs oo 38 jir ah ayaa maxkamadu amartay in xabsiga lagu sii hayo.
Wararka khaar ayaa sheegaya in labo qori oo ninkaan gurigiisa laga helay midka mid ah ay baaritaan ku soo baxday in loo isticmaalay weeraradii magaalada ka dhacay.
Aabaha ninkaan dhalay ayaa sheegay in wiilkiisa uu ku noolaa cabsi wayn oo uu ka qabo dadka soo galootiga ah in ay la wareegi doonaan Sweden.
Ninkaan ayaa haday ku cadaato dambiyada lagu soo oogay wajihi doona xabsi daa’in.
waxan aad uga xumahay in aan qalday no:+254725176516 wana sidaa ok madama aad tihiin web somali ah ka shaqeya swdan una shaqeya umadan dhibateysan hadii alle idmo waxan idin rajaynaa howl badan iyo hanan wanag